IIMPENDULO - AfricArXiv
Imephu yendlela 2020 - 2023
Yiba negalelo emsebenzini wethu
Sebenzisana: Umphuhlisi wangaphambili-ukujonga inkxaso-mali
Vula ukuPapashwa kwabaFundi
I-infographic: Yabelana ngophando lwakho oluVulekileyo lokufikelela
Ngaphambi kokuba ungenise
Iindawo zokujonga umgangatho
IiRekhodi zoPhando ngeDijithali zase-Afrika: Ukuzoba iMo yeLizwe
Ugcino lwedatha yoPhando ngeAphrike
Ifowuni yabaphandi base-Afrika baselwandle
Isantya seNzululwazi yezeNzululwazi
I-TREND e-Afrika kwinkqubo yokusebenzisana kwi-Intanethi
Joyina iAfricArXiv kwiJOGL
I-Q & A ejikeleze i-COVID-19 kwiilwimi zaseAfrika zommandla
Iividiyo zolwazi zeLwimi ezininzi ze-COVID-19
Ingqokelela yeSayensi evulekileyo kwi 'COVID-19' kunye 'neAfrika' (ext. Url)
Ukudityaniswa kwezibonelelo zeSayensi evulekileyo kwimpendulo esebenzayo ye-Afrika kwi-COVID-19 [ulwaziso]
ULwazi lokuFunda nokuBhala kwi-Afrika kwi-COVID-19
Izifundo esizifundileyo kuqhume lwe-Ebola
Indawo yoPhando kunye nePortal
Ulwazi lweMveli kunye neSayensi e-Afrika
I-AfricArxiv ngumthombo wasimahla, ovulekileyo nolondolozo lwedijithali olukhokelwa luluntu kuphando lwaseAfrika. Sinikezela ngeqonga elingenzi nzuzo kwizazinzulu zaseAfrika zokufaka amaphepha abo asebenzayo, imibhalo yangaphambi kwexesha, imibhalo-ngqangi eyamkelweyo (iprintwe emva), kunye namaphepha apapashiweyo. Funda ngakumbi ngeAfrikaArxiv apha: https://info.africarxiv.org/about
IAfricArxiv yenzelwe bani?
IAfrikaArxiv yenzelwe oosonzululwazi baseAfrika abavela kuzo zonke iinkalo zokwabelana ngeziphumo zabo zophando, kubandakanya iiprintprints, iiposti, ikhowudi nedatha.
Kutheni le nto sifuna indawo yokugcina yaseAfrika?
Sifuna indawo yokugcina eAfrika.
Yenza uphando lwase-Afrika lubonakale ngakumbi
Ukusasaza ulwazi lwaseAfrika
Yenza uphando lotshintshiselwano ngaphakathi kwilizwekazi
Intsebenziswano yenqanawa kwilizwekazi
Indawo ekugcinwa kuyo ubungqina bokuqala kwaye isetyenziswa rhoqo kwimeko yeSayensi evulekileyo kwaye yenza enye yeendlela ezilula nezisebenzayo zokwenza ukuba iziphumo zophando zifikeleleke. Ukungeniswa kumodareyithwa ngoososayensi ke ngoko kukho inkqubo ethile yokuphononongwa koontanga ababandakanyekayo - ukanti yahlukile ekupapashweni kwejenali ehlolwe ngokutsha koontanga. Kwiimeko ezininzi oku kusenokwenzeka emva kokungeniswa kwindawo yokugcina impahla.
Yahluke njani iAfrikaArxiv kwezinye iindawo zokugcina?
NgeAfrikaArxiv sifuna ukubonelela ngeqonga koososayensi baseAfrika ukuba bapapashe iziphumo zabo zophando ngokukhawuleza nangokukhululekileyo. Ngale ndlela banokufumana ingxelo ngomsebenzi wabo, baphucule ngakumbi kwaye zichonge intsebenziswano kwiiprojekthi ezizayo. Ukuprinta kuyavela njengenxalenye yeSayensi evulekileyo. Ukuba nendawo yokugcina imveliso kwindawo yophando yase-Afrika kungakhokelela kuphando lwangaphakathi lweedisciplinary elungisa imiba yase-Afrika.
Siyathemba ukuba iya kunika izazinzulu zase-Afrika ukuba zibonakale kwihlabathi liphela kwaye liza kuzibandakanya ngakumbi kwintsebenziswano kuphando lwangaphakathi e-Afrika. Inzululwazi yenziwa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo ezinamaqela ophando asasazeke kwihlabathi liphela. Ukwakha abahlali kwezi ndlela zokuziphatha kunye nokuchazwa kwimimandla ethile kuvumela izazinzulu kunye nabanye abachaphazelekayo (abenzi bomgaqo-nkqubo, oosomashishini, abasebenzi bezonyango, amafama, intatheli) ukufumana iziphumo zophando zabo ngobuchule.
Yeyiphi imiceli mngeni abajongana nayo oosonzululwazi base-Afrika?
Ukubonakala okuphantsi ngaphakathi kwamazwe
Abaphandi base-Afrika bavame ukungadityaniswa kunxibelelwano lwamanye amazwe
Ziza kungenelwa njani izazinzulu zase-Afrika?
Ukubonakala ngakumbi kwesiphumo sophando esivela kwilizwekazi
Yongeza amanani athile malunga
Iziphumo zophando ezigqunywe kwiijenali zamazwe aphesheya?
Iziphumo zophando zaseAfrika ngokubanzi?
Inethiwekhi engcono kunye nokusebenzisana
Sinethemba lokuba izazinzulu zase-Afrika ziya kwazi ngakumbi iziphumo zophando, ngakumbi ukuqinisa ukwahlula phakathi kwe-francophone kunye noluntu lwesayensi ye-anglophone kwilizwekazi. Sikhuthaza ababhali ukuba banikeze isishwankathelo esifutshane nokuba kungolwimi lwesiFrentshi okanye lwesiNgesi.
IAfrikaArxiv iza kubonelela ngeqonga lokukhangela ngobuchule kwamaqabane asebenzayo ngaphakathi e-Afrika nakumazwekazi jikelele.
Yenziwe njani iAfricArxiv?
Umbono weza e-AfrikaOSH nge-Twitter. Isakhelo seSayensi esivulekileyo ibonelela ngezibonelelo kumzamo okhokelwa ngabahlali, othi wehlise iindleko kunye nobunzima kwaye uvumela ukugxila kwimfundo malunga namalungelo okushicilela nokukhuthaza iAfriArXiv.
Sisondela kwizazinzulu zase-Afrika ezizimeleyo ukuba ziphikise izimvo kwaye siphuhlise intsingiselo kunye nokuya kwizazinzulu ukuba zibandakanyeke ekugayeni amangenelo (kwiqela le-PR), kumodareyitha, kwibhodi ecebisayo yekomiti.
Funda iAfricArxiv ukuqaliswa kwepapasho apha: https://cos.io/about/news/center-open-science-and-africarxiv-launch-branded-preprint-service
Ngaba ilawulwa njani iAfriArxiv?
Sineqela eliza kusebenza silungelelanise imisebenzi ukude kwi-intanethi. Emva kokungeniswa, iimodareyitha ezimbini okanye nangaphezulu ziya kujonga amanqaku ngokuchaneka nokubaluleka kwazo.
Ngubani ojongana neendleko zokulawula iAfriArxiv?
Akukho zindleko zibalulekileyo / zezemali ezichaphazelekayo (ngaphandle kokuthenga idomain kunye nexesha) - yonke imizamo kunye nokusebenzisana kwenziwa ngokuzithandela ekuqhubeleni phambili kunye nokwahluka kwesayensi.
Izibonelelo zoncedo zibonelelwe I-OSF, ephuhliswa liZiko leNzululwazi evulekileyo, engenzi nzuzo eyakha iziseko zophuhliso loluntu ukulungiselela ukuhamba komsebenzi wophando kwaye inika inkxaso kwimizamo yeenzame ezininzi ezikhokelwa luluntu ezijolise ekwandiseni iinkqubo zeNzululwazi evulekileyo.
Bangakwazi ukuyisebenzisa njani i -AfricaArxiv?
Izazinzulu zase-Afrika zinokufaka zombini iiprint yokuqala kunye neeposti kunye neziphumo ezibi, ikhowudi, iidatha, i-theses, nolwazi lwendabuko apho kusebenza khona kwaye ngokuhambelana I-UNDRIP Inqaku lama-31.
Banokukhangela kwindawo yokugcina izinto ukuze bazi ezinye izinto ezenzululwazi kwilizwekazi ezikwenzayo kwicandelo labo lophando.
Siyakwamkela ukungeniswa ngesiNgesi, isiFrentshi kunye nesiPhuthukezi kunye nezinye iilwimi zaseAfrika ezinjengeAkan, isiTwi, isiSwahili, isiZulu,… kwaye bakha ichibi labahleli elinokuhlela ungeniso. Kuhlala kulula ukuchaza umsebenzi wakho ngolwimi lwakho lwenkobe. Kuba uninzi lwezazinzulu zaseAfrika zinokuhambisa iilwimi ezininzi kwijenali ehlaziyiweyo kwisiFrentshi okanye isiNgesi aziyi kuba yingxaki.
Izazinzulu zase-Afrika ezinqwenela ukwabelana ngemibhalo ebhaliweyo kwiAustrArxiv okanye kolunye ugcino lwamva kufuneka ziqwalasele kwangaphambili, ukuba ijenali leyo bacwangcisa ukuyipapasha iyahambelana nokupapasha umbhalo obhaliweyo kwimbonakalo yeprintory. Uninzi lwejenali zemfundo luye lwamkela ukupapashwa kwangaphambili. Sincoma ukujonga i I-SHERPA / RoMEO Inkonzo eneenkcukacha okanye imigaqo-nkqubo eyabelwe inqaku lejenali.
Zeziphi iinqobo zokwamkeleka?
Uyilo lomgaqo-nkqubo: ukungeniswa kufuneka kuhambelane nomgangatho othile kwaye kuthobele iindlela ezilungileyo zesayensi kunye nemigaqo yesayensi evulekileyo.
Isikhokelo sokungeniswa ukubonwa kakuhle kwezi veki zimbini zizayo xa benaniselana nabanye oosonzululwazi base-Afrika. Siza kwakha uluntu olomeleleyo lokujikeleza uluntu olusebenzayo kwaye siqhubeke nokubonisana nabo ngokuqhubekekayo nokwenza umsebenzi kunye nokucacisa iqonga kwiimfuno ezithile kumxholo wophando wase-Afrika.
Ingongezwa njani idatha eyongezelelweyo?
Ngombhalo ngamnye obhaliweyo ungongeza ezinye iifomathi nakweyiphi na imeko ngokugcinwa komda. Cofa nje, kwaye utsale kwaye ulahle okanye ukhethe iifayile kwiprojekthi nganye. Ungadibanisa nakwezinye iinkonzo ezinje ngeFigshare, iDropbox, okanye iGitHub. Bona apha umzekelo https://osf.io/nuhqx/.
Ndingayihlaziya njani inguqulelo ebhalwe ngesandla?
Ukulungisa enye yamalungelo akho owamkelayo, unokuhlaziya ukungena kwe-DoI ngohlobo olutsha lwenqaku lesibhalo nge-akhawunti yakho.
Unganakho ukongeza ngokulula inqaku elihlaziyiweyo lontanga kwi-DoI kwinguqulo yangoku yeprint.
- uyenza njani loo nto kwi-OSF: uncedo.osf.io/hc/en-us/articles/360019930573-Edit-Your-Preprint<
Ngaba ndingawupapasha umsebenzi wam ngejenali eyahlukileyo emva kokwabelana ngokuprintwa kwam kwi-AfrikaArXiv?
I-AfricArXiv kunye namaqonga amaqabane ethu liqonga lokuFikelela ngokuVulekileyo lokugcina izinto kunye nathi wabelana ngomsebenzi wethu njenge Ukufikelela okuVulekileyo okuluhlaza (ukuzigcina ngokwakho). Ke ewe ungangenisa imibhalo-ngqangi yakho kwijenali.
Siphakamisa ukukhangela https://www.ajol.info/index.php/ajol kwaye https://doaj.org/ ukufumana ijenali ethembekileyo yokupapasha umsebenzi wakho ngexabiso eliphantsi lokuqhubekeka kweenqaku (APCs).
zeSITA I-HTML5 I-FAQ Ephendulayo
Ngaba uneminye imibuzo? Sithumelele i-imeyile info@africarxiv.org
I-AfricArXiv lityikityo le
Umgudu wenyanga we-AfricArXiv
Bhalisa kwincwadana yethu yenyanga
Umxholo we -AfricaArXiv yi CC BY 4.0 ilayisenisi- inikwe amandla ngu Ukufikelela kwiimbono ezi-2